Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuthola i-backlink yangaphandle ye-SEO?
Masibhekane nakho - ukwakha emuva kwangaphandle kwe-SEO kungenye yezingxenye ezisemqoka ezingashukumisa iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ukuba ikwazi ukuchayeka kangcono ekusesheni kwe-intanethi. Kodwa ngaphambi kokuba uqale, cabangela leli qiniso elimbi ngokubakha ekwenzeni injini yokusesha. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi ulungele lezi zisekelo eziyisisekelo ngaphambi kokuthi uqhubeke nokuthola ama-backlink wangaphandle we-SEO:
Kufanele ube iwebhusayithi yakho noma ibhulogi kahle kahle ezingeni lobuchwepheshe.
Kufanele wakhe isakhiwo sokuqina esakhiweni esiqinile.
Kufanele uchithe isikhathi sakho nomzamo ube okuqukethwe okuyingqayizivele okuletha inani. Nazi ezinye zezindlela ezingcono zokuthola ama-backlink wangaphandle we-SEO:
1. Khetha ithuluzi lokuhlola lokuxhumanisa kwesokudla, njenge-Semalt Analyzer, i-Screaming Frog SEO Spider, i-Moz's Open Site Explorer - ngawahlola ekusebenzeni amawebhusayithi namabhulogi ambalwa. Yenza kahle ngokulungisa zonke iziphambeko zobuchwepheshe ezingaba nomthelela ekuhlangenwe nakho okuhle komsebenzisi ngamaphethini alandelayo:
isakhiwo sewebhu esabelayo eselula nesipiliyoni somsebenzisi.
okuqukethwe kwekhasi eliphindaphindiwe, kanye ne-Metadata eyimpinda.
302 uqondisa futhi uqondise kabusha izinketho.
ama-404 amaphutha kanye nazo zonke iziphambeko ze-canonical.
Ukusetshenziswa okungalungile kwama-backlink angaphandle kanye neziqondiso ze-SEO (e. g. , noindex, nofollow).
2. Gxila kuzidingo zomsebenzisi, kunokuba nje usebenze nge-Google's ranking algorithm. Ngisho lapha ukuthi okuqukethwe kwakho KULELE ukuletha inani langempela futhi sicela umsebenzisi. Ngaleyo ndlela, ukutshala isikhathi sakho nemizamo ekwakheni ama-backlink wangaphandle we-SEO - ukuzithola ngokwemvelo ngokuqukethwe kwakho - qiniseka ukuthi awunayo okungenani izinkinga ezilandelayo:
Okuqukethwe kwakho kuhluleka ukujabulisa umsebenzisi wangempela (imibhalo emide kakhulu noma ehlabayo, lokho angeke kukhange izidingo eziyinhloko zosesho bukhoma).
Okuqukethwe okwesikhashana (khumbula - iwebhusayithi yakho noma ibhulogi kulindeleke ukuba idlale kahle futhi kusize umsebenzisi ngaphezu kwezingqinamba zakho ze-niche).
Akunakwanele ukucwaninga kwedatha ngokujulile (yebo, ukuba negunya elinengi lingase lihle ukuzitholela phezulu ekusesheni kweGoogle, kodwa kusengakwaneli ukunqoba).
Ukungabi nokufunda nobuntu (cabanga ukudala izifundo zakho, izipredishithi ezithinta amehlo, i-infographics, nanoma yikuphi okuqukethwe okubalulekile okukhangayo kulabo ababukeli bakho).
Isikhalazo esibucayi esibucayi (yenza kube lula ukufunda ngezinombolo zamabhulogi, izihloko ezinhle, nezinhlu ezichazayo, sebenzisa kuphela amabhlokhi athelekayo emibhalo yombhalo, izihloko eziphoqelela, nezithombe, kanye namafonti abukeka ngokubukeka kanye nezizinda ezifanelekayo).
3. Indlela kuphela yokuthola i-backlink yangaphandle ye-SEO ngokwemvelo yakha ubuhlobo. Masibhekane nakho - iwebhusayithi yakho noma ibhulogi akuyona isiqhingi esivelele esahlukana namanzi olwandle. Ukuxhuma kuphela okwakhiwe kahle nobuhlobo obunempilo kungaholela ekutholeni ama-backlink anamandla futhi kutholakale kabanzi kwiWebhu. Ukuze uzuze enkambeni esebenza ngendlela ecishe ibe yinkimbinkimbi cabanga ngalokhu okulandelayo:
Ukunikela okuningi ngokuqukethwe kwakho kungakuvumela ukuba uthole kuphela izinto ezingemuva ezikhomba kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi ngokubuyisela kodwa siza iwebhusayithi yakho noma ibhulogi kudala ukuhola, amasheya, okulandelayo, njll.
Ukusungula ubudlelwane obuqinile futhi obuzuzisanayo nabathonya bemboni kanye namabhulogi aphezulu. Ungalokothi uzibophezele kulokho okudabukisayo nokujwayelekile okungeyona usizo nge-imeyili ebandayo.
Ukubhala imibono ecatshangelwe kahle futhi efanelekile kuma-blogs avakashelwe phezulu noma amawebhusayithi adumile kakhulu embonini yakho yebhizinisi noma emakethe yemakethe.
Ukuguqula i-website yakho noma ibhulogi ibe kufanelekile, kufanele uzuze lezo zindlalelo eziyigugu ngokuqinisekile. Ngisho ukuthi ungabonisa umusa ngezihloko zakho siqu, okuthunyelwe noma ukubhalisa kwezivakashi eziyigugu kwezinye izici ezishisa kakhulu noma izihloko ezifunwa kakhulu - ukuze uthuthukise okuqukethwe kwakho ngokwemvelo futhi ubonakale kubasebenzisi abaningi abanentshisekelo kwi-intanethi ngangokunokwenzeka.
Ukuphetha, khumbula ukuthi umgomo wakho wokugcina ukujabulela ukuphawula okungaxhunyiwe kanye namasheya ngezindaba ezithandwayo zenhlalo - kungakapheli amahora emva kokushicilela isibuyekezo esisha kakhulu, ukukhishwa okusha kokuqukethwe, noma okusha umkhiqizo noma isevisi. Ngakho-ke, ngincoma ukuthi ngifinyelele kwisifundo esibanzi sokuKhuthazwa kokuqukethwe kocwaningo lwakho lwesikhathi esizayo. Lokho kuzohlale kukhokha, ngiyaqiniseka Source .